सत्यनारायणको दावी–‘एमाले संसदीय दलको नेता मै हुँ’
जनकपुरधाम । चैत्र ४ गते ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ । अब संघसहित प्रदेशमा पनि संसदीय दलका नेता बन्नका लागि दौडधूप शुरु भएको छ– दुबै पार्टीमा । प्रदेश २ मा पनि एमाले र माओवादीबाट संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । एमालेका तत्कालिन संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल थिए । पार्टी एकतापछि नेकपा संसदीय दलका नेता पनि उनी नै भए । तर नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले उनलाई हटाए ।
र एमालेकै सांसद शत्रुधन महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाइयो। तर अब एमालेको संसदीय दलका नेता को त ? यसअघि एमाले र नेकपा दुबैका संसदीय दलका नेता रहेका सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘एमालेका संसदीय दलका नेता पनि मै हुँ।’ महतोलाई नियमसंगत तरिकाले संसदीय दलको नेता नबनाइएको मण्डल बताउँछन्। ‘मबिरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा मलाई सफाइ दिने मौका दिनुप¥थ्यो। तर दिएन,’ मण्डलले टुडे एक्सप्रेससँग भने, ‘यसबारे सभामुखलाई पनि जानकारी गराएका थियौं ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधीसभा बिघटन गरेपछि नेकपाका प्रदेश सांसदहरू ओली र प्रचण्ड–नेपालतीर ओहोरदोहार भएका थिए । त्यसक्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद मिलेर संसदीय दलको नेताबाट ओली पक्षीय सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुधन महतोलाई बनाएका थिए ।
अब अदालतको निर्णयपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि एमालेको संसदीय दलको नेता आफू नै रहेको उनको जिकिर छ । ‘म अलरेडी संसदीय दलको नेता हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘म त एमालेमा प्रतिस्पर्धा गररे आएको हुँ। र, मबिरुद्व कसैले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेको छैन् । त्यहीं भएर म नै नेता हुँ।’ प्रदेश सभाले आफूलाई नै एमालेको संसदीय दलको नेताको मान्यता दिनेमा विश्वस्त छन् मण्डल । ‘मलाई मान्यता नदिए मान्दैनौं भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘ प्रदेशसभा सचिवालयलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छ ? कुन आधारले महतोलाई मान्यता दिन्छ ।
30 दिन पहिले 65 Post Views